Kpido: netflix | Martech Zone
Ahụmịhe ndị ahịa nke ndị na-edebanye aha ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ma a jigide ha dị ka onye ahịa ma ọ bụrụ na ha nwere ike ibuli elu. Were ngwa eji eme ihe bu uzo di nkpa iji mee nke a. Y’oburu na ibu ahia ahia, ahia, ma obu oru - nyocha, nloghachi, nnabata, oku, na itinye ego otutu oge nwere ike inye data di egwu nke puru ikwuputa izu ahia. Nke a dị oke mkpa maka azụmaahịa. Ọ bụ ezie na omume ndị ahịa gị
N'ọtụtụ n'ime usoro izizi email kachasị mma m gụrụ, ndị ọkachamara na-egbochikarị ndị na-ere ahịa email ka ha ghara ịmepụta ozi ịntanetị na otu onyonyo. Enwetụbeghị mgbe m nwere mmasị na iwu dịka nke a, mgbe m na-eche na ịnwale usoro dị iche iche bara uru maka ule ahụ. Naanị taa, enwetara m ozi email a dị egwu site na Netflix. O nwere akara okwu: Ọrụ enyo █████ O juru anya na Netflix █████ Mgbe ị mepere email, ọ bụ otu ozi na-egosi naanị